Ukuqhwangwa online ukuqhwangwa okwenzeka uma umuntu esebenzisa i-internet ukuthi akuhlambalaze, ukuhlaze noma akusabise kuma social media anjengo WhatsApp, Mxit noma ama SMS. Kungenzeka ngoku faka izithombe, mese usho izinto ezimbi noma ezibuhlungu noma uqale amahemuhemu ngawe.
Ukuqhwangwa online kungaba yingozi kumuntu kuloyo oqhwangwayo engagcina esephutha esikoleni, angenzi kahle esikoleni, ecindezelekile, athatha izidakamizwa ezinjengo tshwala noma ezinye izidakamizwa noma abe nezinye izinkinga zempilo. Imilayezo i-posteka kalula futhi awudingi noku sebenzisa igama lakho, ngakhoke kungabanzima ukuthi wazi ukuthi ubani okuqhwagayo futhi kube nzima ukukunqanda.
Zivikele ungaqhwagwa online:
- Qikekela ukuthi ufakani kwi internet ama websites kanye nama social media accounts akho.
- Uma ukuFacebook, Instagram, Twitter, Snapchat noma amanye ama site qikelela ukuthi ama-privacy kanye mana security settings akho athini.
Kubalulekile ukuthi ucabange ngaphambi kokufaka izinto online, ukuthi ubani okhuluma naye nokuthi uthini kwabanye. Kuhle ukuthi ucabange ukuthu wena ungazizwa kanjani uma leyo post ingaba ngawe.
Funa usizo uma ukhathazekile ngokuqhwagwa online, noma wazi oke waqhwagwa.
Uyakwazi ukuceba abakuqhwagwayo ku-Social media kanye nama websites. Thatha isithombe sako ukuqhwagwa ukuze ube nobufakazi.
Khumbula ukuthola ukwesekwa, awukho wedwa, baningi asebeke benzekelwa yiloku. Ungakhuluma nabazali bakho, umuntu omdala omethembayo, umgani noma ufonele i-Childline kanye ne-Lifeline: bazo kusiza uthola usizo locwepheshe.